Antoine Griezmann - Experience Best News from Nepal
Antoine Griezmann बाट
युनाइटेडकाे नजर ग्रिजम्यान माथि !! मोटो रकम खर्चिन लुकाकु र पोग्वालाई रिलिज गर्ने !!
म्यानचेस्टर युनाइटेड नयाँ सिजनमा एट्लेटिको मड्रिडका खेलाडी एन्टोइन ग्रिजमनलाई अनुबन्ध गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ । एट्लेटिकोबाट बार्सिलोना जाने तयारीमा रहेका ग्रिजमनलाई युनाइटेडले हाइज्याकका रुपमा ९५ मिलियन पाउण्डमा क्लबमा ल्याउने तयारीमा लागेको छ । विश्वकप विजेता फ्रान्सेली स्ट्राइकर ग्रिजमनलाई बार्सिलोनामा अनुबन्ध...
किलियन एम्बाप्पेको मड्रिड जाने बारे हालै विभिन्न अफबाह चलिरहेको छ । हालै अफवाह रहेता पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले एम्बाप्पे मड्रिड जाने भए पी.एस.जीले एथलेटिको मड्रिडका ग्रिजम्यान ल्याउने बताएको छ । विश्वकप विजेता फ्रान्सका अट्याकर ग्रिजम्यान बार्सिलोना जाने बारे चरम विबाद...
समर ट्रान्सफरका निम्ति ग्रिजम्यान बार्सिलोना जाने बारे चरम हल्ला भइरहेको छ भने विभिन्न खेल विध देखि खेलाडीले ग्रिजम्यान जाने नजाने बारे आफ्नो प्रतिबेदन समेत दिएका छन । धेरैले ग्रिजम्यान बार्सिलोना आउने बारे आपत्ति जनाएका छन् भने बार्सिलोनाका पुर्बी खेलाडी जाभीले...
खेल जित्ने दबदबा एथलेटिकोमा बढ्यो !! बार्सिलोनालाई जित्ने एथलेटिकोले बनाउदै छ योजना
ला लिगामा यो हप्ता एथ्लेटिको मड्रिडले खेल जित्यो, बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो, रियल मड्रिड पराजित बन्यो । यसले शनिबार राति हुने एथ्लेटिको र बार्सिलोनाको खेलको महत्व बढेको छ । यो हप्ता एथ्लेटिको मड्रिडले जिरोनालाई २-० ले हराएको थियो । बार्सिलोना भिलारियलसँग...
विश्व फुटबलमा चर्चित खेलाडी लुईस फिगो, राउल, बेबेटो, गर्रिन्चा, जर्ज बेस्ट, एरिक केन्टोना, डेभिड ब्याकम र ब्र्यान रोब्सन लगायत खेलाडीमा एकै समानता छ । फुटबलमा ७ नम्बरमा जर्सी लगाउने फुटबलहरुको सुचिमा यी नाम जोडिएका छन् । इतिहासलाई हेर्ने हो...
निराश ग्रिजम्यान मड्रिड छोड्ने दाउमा !! बार्सिलोनाले सम्झौता नगर्ने, पीएसजीले २०० मिलियन दिने !!
एन्टोइन ग्रिजम्यान आफ्नो आबर्द क्लब एथलेटिको मड्रिडमा निराश देखिएका छन्, उनले यसै सिजन युभेन्ट्ससंग को हार पश्चात क्लब छाड्ने निर्णयमा पुगेको समाचार बाहिरिएको छ। क्लब छाडे संगै उनको नजर यूरोपको ठुला क्लबमा ठोकिएको छ जससंगै उनले बार्सिलोना जाने सोच...
ग्रिजम्यानको उत्कृस्ट खेलाडी चयन : मेस्सी, रोनाल्डो बाहेक को को ??
एन्टोइन ग्रिजम्यान हाल एथलेटिको मद्रिडबाट आफ्नो खेल पदर्शन गर्दै आएका छन् भने उनले संसारका उत्कृस्ट खेलाडीहरुसंग खेल सामना गरिसकेका छन्। फ्रेन्च खेलाडी ग्रिजम्यान जो रसियन विश्व कपका विजेता समेत हुन उनले हालै आफ्नो खेल जीवनका उत्कृस्ट खेलाडीहरु मिडिया सामु...
९यसकारण आउँछ महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि बैंस !
१०विश्व रेकर्डमा एम्बाप्पे मेस्सी रोनाल्डोलाई पारे पछाडी !! कसैले उनको रेकर्ड तोड्न नसक्ने दावी !!
११यिनै हुन् विश्वभर भाइरल बनेर हंगामा मच्चाएका नेपाली यौनकाण्डहरु !
१२३२ वर्षमा मेस्सी खेलमा पूर्ण छन् !! मेस्सीलाई बालोन डी’ओर जित्न सकस छ : फाब्रेगास
१३हट पटानी पाच सय मात्र बोकेर मुम्बई आएकी थिइन्, यस्तो छ अहिले उनको जीवनशैली !!
१४विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंकालाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लने दाउमा अष्ट्रेलिया
१५नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम समझदारी, अब सबै खर्च रोजगारदातालेनै व्यहोर्ने
१६टु पिसमा परमिता बिन्दास (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
१७मेयर चौधरी माथी लाग्यो गम्भिर आरोप, पुष्टि भए के होला ?
१८सम्भोग गर्दागर्दै कण्डम निकालेपछि १२ वर्ष जेल
१९अन्तत : ‘मि टू’ प्रकरणमा नाना पाटेकरलाई ‘क्लिन चिट’
२०३३ लागिन् नम्रता !! ब्वाइफ्रेन्डविनै मनाइन् जन्मदिन